Ifulethi elihlaziyiweyo elinebalcony -5/6 abantu
Ifakwe emazantsi emithambeka, indawo yethu eyi-41 m2, eyalungiswa ngokupheleleyo ekupheleni kuka-2019, iyakwamkela ukuba uhlale kamnandi nosapho okanye nabahlobo.
Uya kufumana zonke iivenkile kwindawo ekufutshane (imarike encinci, irenti ye-ski, i-ESF, i-nursery, njl.
Uyilo lwendlu yenzelwe ukugcina indawo yokuhlala kunye nentuthuzelo.
Ikhitshi, lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba izitya we-10, lixhotyiswe ngokupheleleyo.
Amagumbi okulala anemiqamelo kunye needuvethi (i-1 kabini kunye ne-4 eyodwa).
Igumbi lokulala eli-1: ibhedi enkulu: 160x190 (ilala 2)
Igumbi lokulala 2: ibhedi yebhedi + ibhedi yedrowa (90x190) / (ilala 3)
Ibhedi yesithandathu "yekhabhinethi" ifumaneka kwi-corridor. Isango lokhuseleko kunye nomkhusane wemfihlo. Ubungakanani 70x180. Ayifanelekanga kumntwana ongaphantsi kweminyaka emi-6 okanye umntu omdala.
Ibhedi yokuhamba kunye nesitulo esiphezulu siyafumaneka.
Unokuzisa ibhedi yakho yelinen kunye neetawuli okanye uzirente kwisiza kumboneleli wethu wenkonzo (10 € / pers - ucacise xa ubhukisha).
Ifakwe kumphakamo we-1450m, indawo yokutyibiliza yokutyibilika eVal Louron ivuleleka kwindawo ezinikele kakhulu kulonwabo lokutyibiliza, ngokukodwa enye yezona ndawo zibalaseleyo zabaqalayo ePyrenees.
Ukusukela ngo-2019, uqhagamshelo lwemoto yentambo iqhagamshele iLoudenvielle (15mn) kwisikhululo sasePeyragudes.
Enye yezona ndawo zingonakaliswanga ePyrenees, iVal Louron ikwayindawo efanelekileyo yokutshaja iibhetri zakho entliziyweni yendalo engonakaliswanga ngelixa uxhamla kumaziko anamhlanje axhotyiswe ngawo intlambo. Ungaphoswa kukufumanisa iBalnéa, indawo yokuqala yokuphumla kwamanzi ashushu kwiFrench Pyrenees, ekwi-8km ukusuka kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
Umboneleli-nkonzo uya kubakho xa ufika xa unikezela ngezitshixo kunye noluhlu lwempahla.
Uya kuba neenkcukacha zakhe zoqhagamshelwano kwaye uya kuba sezakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho ukuze aphendule imibuzo yakho.
Kwimeko yokufika kade, ibhokisi yesitshixo ikwindawo yakho kwaye iya kukuvumela ukuba ufike ngokuzimeleyo kwiindawo.
Uya kuba neenkcukacha zakhe zoqhagamshelwano kwaye uya kuba sezakho ngalo lonke ixesha…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Génos